Q1 2075/76(Q1 2075/76) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
देशको अर्थतन्त्र कति स्वस्थ ? यस्तो छ केन्द्रीय बैंकको रिपोर्ट
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा देशको अर्थतन्त्र कस्तो रह्यो होला ? नेपाल राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागले यसको संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै आफ्नो रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । पहिलो त्रैमास अवधिमा वार्षिक विन्दूगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फिति बढेको छ । पहिलो २ महिनाको तुलनामा यस्तो मुद्रास्फिति...
काठमाण्डौ । विगतका त्रैमास झै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समेत मुक्तिनाथ विकास बैंकले अस्तित्वमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई फराकिलो अन्तरले पछि पार्दै अधिकांश सूचकमा पहिलो स्थान बनाएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको खूद नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, खूद ब्याज आम्दानी, निक्षेप तथा कर्जा लगानी लगायतका महत्वपूर्ण सूचक...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ । यो बैंकले समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ११ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा बैंकको नाफा करिब ५८ प्रतिशतले बढेको हो । खूद नाफामा छलाङ मारेको रा.बा. बैंकले वितरणयोग्य मुनाफामा...
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बिमा शुल्क आर्जनमा हान्यो छलाङ
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २० करोड ४१ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा खूद बिमा शुल्क आर्जन ५ अर्ब ४३ करोडको उचाईमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको बिमा शुल्क आर्जन ३ अर्ब ७५ करोडमा सीमित थियो । कम्पनीले...
पहिलो त्रैमासमै नवीलले कमायो १ अर्ब बढी नाफा, लाभांश क्षमतामा भने झिनो प्रगति
काठमाण्डौ । नवील बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा औसत प्रगति गरेको छ । यो बैंकले वितरणयोग्य मुनाफातर्फ ९.६१ प्रतिशतको बढोत्तरी गरेको छ भने खूद नाफा र संचालन नाफातर्फको प्रगति समेत सामान्य छ । अघिल्लो वर्ष ८५ करोड १४ लाखमा सीमित वितरणयोग्य मुनाफा बढेर यो वर्ष ९३ करोड ३१ लाखको उचाईमा पुगेको छ । यसैगरी, ८५ करोड १४ लाखमा...
एनआइसी एशिया बैंकको लाभांश क्षमतामा छलाङ, अधिकांश सूचकमा चमात्कारिक फड्को
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एनआइसी एशिया बैंकले कमालको प्रगति गरेको छ । यो बैंकको लाभांश क्षमता करिब १०९ प्रतिशतले बढेको छ भने खूद नाफा र संचालन मुनाफामा झनै ठूलो छलाङ मारेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा २७ करोड ८६ लाखमा सीमित रहेकोमा बढेर समीक्षा अवधिसम्म ५८ करोड २२ लाख पुगेको...
जनता बैंकले हान्यो अधिकांश सूचकमा छलाङ
काठमाण्डौ । जनता बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कमालको प्रगति गरेको छ । यो बैंकले वितरणयोग्य मुनाफातर्फ मात्रै करिब २९५ प्रतिशतले छलाङ हानेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा जनता बैंक नेपालको वितरणयोग्य मुनाफा ६ करोड ४८ लाखमा सीमित रहेकोमा बढेर समीक्षा अवधिमा २५ करोड ५९ लाखको उचाईमा पुगेको हो । यो बैंकले खूद...
सेञ्चुरी बैंकको लाभांश क्षमतामा फराकिलो वृद्धि, एनपीएलमा समेत सुधार
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्नो लाभांश क्षमतामा फराकिलो अन्तरले बढोत्तरी गरेको छ । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १० करोड ५७ लाखमा सीमित वितरणयोग्य नाफालाई बढाएर यो वर्ष २० करोडको उचाई चुमाएको हो । बैंकले खूद नाफातर्फ पनि करिब १०५ प्रतिशतको फड्को मारेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ करोड...
सानिमा बैंकको रिजर्बमा पहिरो, बाँकी सूचकमा प्रगति नै प्रगति
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमीटेडको रिजर्बमा पहिरो गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सानिमा बैंकको रिजर्ब करिब ७७ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म १४ अर्ब ३३ करोड सञ्चित रहेको रिजर्ब घटेर ३ अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको हो । रिजर्बमा संकुचन देखिए पनि बाँकी सूचकमा पनि प्रगति नै देखिएको छ । यो...
लाभांश क्षमता बढाएको एनबी बैंकमा खराब कर्जाको थुप्रो, इपीएसमा पनि गिरावट
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमीटेडको लाभांश क्षमता बढेको छ । यो बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २२ करोड बढी वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब ४३ प्रतिशतले बढी हो । बैंकको खूद तथा संचालन मुनाफातर्फ निकै राम्रो प्रगति देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २२ करोड ९७ लाख...
खराब अवस्थाको एनसीसी बैंकमा आमूल सुधार: वितरणयोग्य नाफा र इपीएसमा छलाङ
काठमाण्डौ । धराप अवस्थामा रहेको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकले अधिकांश सूचकमा आमूल सुधार गर्दै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कमालको प्रगति गरेको छ । खराब कर्जाले थिलथिलो भएको यो बैंक व्यवस्थापनले डूबेको कर्जा असूलीमा ध्यान दिएसँगै व्यवसाय बिस्तारमा समेत मन लगाउँदा र पछिल्लो समय काम गर्ने क्रममा पहिलाजस्तो अनेकन बाधा...
मेगा बैंकको नाफामा ३९४ प्रतिशतको छलाङ
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको खुद मुनाफा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासिक अवधिको लागि प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले खुद मुनाफा ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंकले ८ करोड १८ लाख मुनाफा गरेको थियो भने यस वर्ष बैंकले सो रकममा ३९४ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ...